Kuhle Iforamu yekhompyutha kusukela ngo-2004
ngaphezulu ...Isizinda esingezansi noma isizinda esiphakeme
Iyafakeka njengohlelo lokusebenza
Thola isithangami samahhala
Khetha igama le-akhawunti (isizinda sakho) bese usebenzisa ikheli lakho le-imeyili. Uyaziswa ukuthi iphasiwedi yakho eyinhloko yomqondisi izothunyelwa ekhelini lakho le-imeyili. Ngeke size sikuthumele ogaxekile noma ukukhangisa. Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi i-imeyili enephasiwedi yakho eyinhloko yomlawuli ingatholakala kufolda yakho yogaxekile.
Amaforamu asebenza njengezinkundla zokuxoxisana noma zolwazi, ahlinzeke ngobufakazi, futhi ajwayele ukuhlinzeka ngosizo lokuqala ezindabeni ezibalulekile, kepha ngaphezu kwazo zonke lezi zinto, abaluleke kakhulu kusiko lenethiwekhi. Vele uthembele kulwazi lwethu ekusingatheni izinkundla futhi ugxile emphakathini wakho, sizobhekelela ukunakekela, ukuthuthukisa kanye nokuthola izinkundla mahhala. Bhalisa inkundla yakho mahhala manje! Kusukela ngo-2004 sisebenza njengomphathi wethimba lamahhala. Lapha uthola iforamu yakho mahhala, ongayibeka futhi wenze ngezifiso ngaphansi kwemizuzu engu-2. Awudingi noma yiluphi ulwazi lobuchwepheshe futhi ungagxila kokuqukethwe nakumalungu. Awudingi ukukhathazeka ngama-backups, ama-patches, ukuvuselelwa, ukuphepha, njll, sikunakekela konke!
Igama le-akhawunti [A-z no-0-9]: .webforum.eu
Ngokuqala kwakho wamukela i- Imigomo yokusetshenziswa.
Amaforamu asebenza njengezinkundla zokuxoxisana noma zolwazi, ahlinzeke ngobufakazi, futhi ajwayele ukuhlinzeka ngosizo lokuqala ezindabeni ezibalulekile, kepha ngaphezu kwazo zonke lezi zinto, abaluleke kakhulu kusiko lenethiwekhi. Vele uthembele kulwazi lwethu ekusingatheni izinkundla futhi ugxile emphakathini wakho, sizobhekelela ukunakekela, ukuthuthukisa kanye nokuthola izinkundla mahhala. Bhalisa inkundla yakho mahhala manje! Kusukela ngo-2004 sisebenza njengomphathi wethimba lamahhala. Lapha uthola iforamu yakho mahhala, ongayibeka futhi wenze ngezifiso ngaphansi kwemizuzu engu-2. Awudingi noma yiluphi ulwazi lobuchwepheshe futhi ungagxila kokuqukethwe nakumalungu. Awudingi ukukhathazeka ngama-backups, ama-patches, ukuvuselelwa, ukuphepha, njll, sikunakekela konke! Imibandela yokusebenzisa kusukela ekusetjenzisweni iyasebenza.